Nhazi - Imewe Mmewe
Igwe Okwu Designlọ ihe eji emepụta Switzerland bụ BERNHARD | BURKARD chepụtara OYO pụrụ iche nke na-ekwu okwu. Speakerdị onye na-ekwu okwu bụ okirikiri zuru oke na-enweghị ezigbo nguzo. Onye na-ekwu okwu BALLO na-atọgbọ, mpịakọta ma ọ bụ kpọgidere maka ahụmịhe egwu ogo ogo 360. Ihe okike a na-agbaso ukpuru ndi eji eme ihe. Akara mara mma na-ejikọ ọkwa abụọ. Ọ na - echekwa onye na - ekwu okwu ma bulie ụda bass mgbe ị dina n’elu ala. Onye na-ekwu okwu ya nwere batrị Lithium nwere ike ịrụgharị ma rụọ ọrụ na ọtụtụ ngwaọrụ ọnụnụ. Igwe jaket 3.5mm bụ nkwụnye mgbe niile maka isi okwu. Igwe okwu BALLO dị na agba iri.
Ụlọ Obibi Ọkụ Nke Onwe Ya
Ụlọ Obibi Ọkụ Nke Onwe Ya Thermostat maka Smartphone na-enye ntakịrị ihe, ọmarịcha mara mma, na-emegide ụkpụrụ ọdịnala ọdịnala. The translucent cube na-aga site na-acha ọcha na agba n'otu ntabi anya. Ihe ị ga - eme bụ itinye otu n’ime ihe nkiri ise na - agbanwe agbanwe n’azụ ngwaọrụ. Dị nro ma dị nro, ụcha ahụ na-eweta mmetụ dị nro nke mbido ya. A na-eme ka mmekorita anụ ahụ dị ntakịrị. Mmetụta dị mfe na-enye ohere ịgbanwe ọnọdụ okpomọkụ mgbe a na-eme njikwa ndị ọzọ niile site na ama nke onye ọrụ. E-ink ihuenyo ahọrọ maka ogo ya enweghị atụ na obere ume ọrụ.
Oriọna A na-etinye isi iyi ọkụ nke oriọna a pụrụ iche n'etiti etiti ahụ, yabụ ọ na-eme ka ìhè dị nro ma dị edo. Ihu ọkụ ahụ dị iche site na ahụ dị mfe nke ukwuu na akụkụ ahụ dị mfe yana akụkụ ala yana ịchekwa ike site na obere ọkụ eletrik na-eme ka ọ nwekwuo njirimara. Akụkụ ahụ nke emetụ n’ọkụ maka ịgbanye ọkụ ọkụ ma ọ bụ Gbanyụọ bụ ihe ọzọ dị ugbu a nke ìhè a pụrụ iche. Nkọwapụta na - eduga n’iche dị iche iche n’ọkụ na n’ịwụnye oriọna ahụ. Ọtụtụ ọkụ site na oriọna ka onye na-ekiri ya ghara iji ọkụ ahụ ga-akụ. Mara mma ibi.
Banklọ Akụ Piggy
Banklọ Akụ Piggy Ihe a bụ njikwa mara mma.Ọdịdị pụrụ iche a na-ahụ anya jikọtara ọnụ dị oke ọnụ, ihe ịchọ mma dị oke ọnụ ma nwee ọnụnọ dị mma nke ndị ezinụlọ, ịkwado ego bụ akụrụngwa na-arụ ọrụ nke ukwuu. Mana njirimara kachasị dị mma DeePee - niile na mgbakwunye na ọrụ ọkọlọtọ zuru oke - bụ na okwu ọhụrụ, pụrụ iche na mmekorita gburugburu "ọla" ụlọ niile.
Onye Ji Mma
Onye Ji Mma Kemgbe narị afọ nke iri na abụọ ka edepụtara akwụkwọ ndụ mbụ dị ka omume ma ọ bụ ihe ngosi ọha. Taa mmata nke ndi mmadu bu njiri mara nke nyocha nke uwa dum, iso ndi ekere eke Chineke, anyi bu ndi zuru oke. "Naanị Ebe a" nọchiri anya oge ọhụụ, ebe a ga - enwe mkpochapụ nke ime ihe ike, na - etinye onwe ya na mbụ bụ ememme ọdịnala, yana nnukwu mgbanwe mgbanwe na - egosi na mmadụ.
Oriọna Na-Etolite Ihe oru ngo a na-ewepụta ịkwado ojiji ọhụrụ a nke na-enye ahụmịhe azịza nke nri zuru oke. Ogige BB Little bụ oriọna na-enwu enwu, na-achọ ịtụgharịghachi ebe osisi na-esi ísì ụtọ n’ime kichin. Ọ bụ olu nke nwere ahịrị doro anya, dịka ezigbo ihe pere mpe. Emegola uzo eji edozi ura ka imenye ya na otutu ulo di iche iche ma nye akwukwo ekwuru ihe. Ogige BB Little bụ usoro maka ihe ọkụkụ, eriri ya dị ọcha na-ebuli ha elu ma ghara ịkpaghasị agụ.
Igwe Okwu Ụlọ Obibi Ọkụ Nke Onwe Ya Oriọna Banklọ Akụ Piggy Onye Ji Mma Oriọna Na-Etolite